Nsọpụrụ ụbọchị: ọ bụ Chineke na-ekpe ikpe | EKPERE NA OZI
Nsọpụrụ ụbọchị: ọ bụ Chineke na-ekpe ikpe
Paolo Tescione	Edere ya November 17, 2020 November 17, 2020
Za Ajọ Omume. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-egosi onwe gị n'ihu Onyeikpe Kasị Elu; ị na-atụ anya ịhụ ya n ’mmụọ ọmịiko, ịdị mma, ma ọ bụ n’ anya nke ikpe ziri ezi kpụ ọkụ n’ọnụ? Ndụ unu na-ebi, omume gị kwa ụbọchị ọ ga-adị Ya mma? - Aga m amata ihe ọjọ niile m na-agaraghị eme, emekwara m. Lee ọgba aghara nke m ga-abụ! Lee mmehie ole n'ọgbọ ọ bụla, kwa ụbọchị! Agaghị echefu echiche, okwu, na ikpe!
Nkwupụta nke akụ. Mgbe imesịrị ọtụtụ mmehie na-enye akọ na uche gị nsogbu, ọ dị gị ka ị nweghị ihe ị ga-atụ egwu, maka na ị na-ekpe ekpere, ị na-abịaru Sakramenti nso, ị nwere ụfọdụ omume ịsọpụrụ Chineke, ị na-enye onyinye ebere… Ma gịnị bụ ihe ole na ole ndị a ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ na njọ mmehie Ọzọkwa: olee ezughị okè, ihe efu, ebumnuche gbagọrọ agbagọ ka i ji soro ihe ọma ị na-atụkwasị obi? Ugbu a chọpụta ya! Kama nke ahụ: ole ezi ihe ị ga - eme ma ọ bụghị naanị nleghara anya gị ka ị mere. Were ya n'ime akaụntụ ...
Akuko nke oge. Ọ bụrụ na m biri afọ ole na ole, ọ bụrụ na enweghị m oge, aga m achọta mgbaghara na mgbaghara n’ihu Onye ọka ikpe. Kama nke ahụ, otu ụbọchị zuru iji tọghata: ma mụ onwe m, afọ na afọ ndụ, agbanweghị! Otu afọ zuru ezu iji bụrụ onye nsọ, ma emebeghị m onwe m otú ahụ na 10, 30, 50 afọ ... O were obere oge iji kpebie onwe m ịmalite: ma eleghara m ya anya! ... Kedu ikpe m ga-enwe? - you cheghị banyere ya?
OMUME. - Kwụsị àgwà ọjọọ ozugbo, gụgharịa Litany of Our Lady.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na Zakịọs wee hụ onwe gị dị ka onye ya
Next Post → Post ozo:Gwa ndi ezi-na-ulo ka ha nye gi amara di iche-iche